प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारको गन्ध : जसको कुकुरले नै दैनिक ३ हजारको खाना खान्छ ! (भिडियाे)
काठमाडौं, साउन २८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचार हुनसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । ‘एन्टि करप्सन मुभमेन्ट नेपाल’ नामको संस्थाले हालै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उक्त संस्थाले एक भिडियो मार्फत प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को अपहेलना गरेको र ऐन बिपरित कार्य गरेको भन्दै उनलाई जहिले पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सकिने बताएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण एने २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ का अनुसार ः कुनै पनि सरकारी पदाधिकारी भर्ना भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । सम्पत्ति बुझाउन नसकेको खण्डमा कारण सहित पत्र बुझाएको अवस्थामा ३० दिनको म्याद थप पाउने व्यवस्था छ ।
यदी पत्र पनि नबुझाएको अवस्थामा ५ हजार रुपियाँ दण्ड गरी सम्पत्ति पूरा छानविन गर्न पाउने पूर्ण अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । यसैले पनि उक्त संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ दफा ५० को उपदफा २ को उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । अर्थात् उनले गैरकानुनी काम गरेकाले कानुन अनुसार जुनसुकै बेला कारवाही गर्न सकिन्छ ।
उक्त संस्थाले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्तिमाथि थुप्रै आशंका गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री हुनु र सम्पत्ति कमाउनु दुई फरक कुरा हुन् । उनको सम्पत्ति श्री ५ महाराजको सम्पत्ति भन्दा कम छैन । तर कसरी आयो यति धेरै सम्पत्ति ?’ संस्थाका एक प्रतिनिधिले भिडियो मार्फत सोधेका छन्, ‘पढ्नका लागि डडेलधुराबाट पढ्न भनी सामान्य कपडा मात्रै लिएर आएका देउवाले कसरी यति सम्पत्ति कमाए ?’
भिडियोमा बोल्ने संस्थाका ति प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘नेताहरुसँग सम्बन्ध बढाएर देउवा पढ्नका लागि २०४४ सालमा बेलायत गएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यसबेला सम्म पनि उनको साथमा सम्पत्ति निश्चित मात्रै रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार देउवा बेलायत छँदा ०४६ सालमा हप्ताको १ सय ३५ पाउण्ड तलव लिएर बिबिसीमा जागिर खाएका थिए । त्यस क्रममा उनी ५ पाउण्डको सस्तो मुल्यमा बिहान–बेलुका खाना खाएर एक रेष्टुरेण्टको सोफामा सुत्थे ।
त्यसको २० बर्षपछि उनको साथमा यति धेरै सम्पत्ति कसरी कहाँबाट आयो ? भनी उक्त संस्थाले सोधेको छ । उनको अचल सम्पत्ति नै धेरै छ । यतिसम्म की, उनको घरमा पाल्ने कुकुरले पनि ३ हजारको खाना खान्छ । जसको हेरचाहका लागि कामदार छुट्याइएको छ ।
संस्थाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिँदै देउवाले अकुत सम्पत्ति कमाएको बताएको छ । जब की, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति भने कति छ उनी आफैँलाई थाहा छैन ।
संस्थाका ति प्रतिनिधिले किटान साथ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्न नसके पनि उनले भ्रष्टाचार गरेको गन्ध आएको बताएका छन् । काठमाडौंमा उनको विलाशी जीवन हेर्ने हो भने सम्पत्ति सुद्धिकरण, अख्तियार र अन्य निकायले पनि उनको सम्पत्तिबारे समात्न सक्ने थुप्रै प्रमाण छन् ।